Ebro ndagwurugwu: njirimara, ihu igwe, geology na usoro | Netwọk Mgbasa Ozi
Spain nwere ọtụtụ osimiri nke ọdọ mmiri dị iche iche. Osimiri kachasị ukwuu na Spen niile bụ Ebro.Ọ bụ osimiri nke mmiri ya dị na Northeast nke mpaghara Iberian Peninsula, nke dị n'akụkụ North, na Duero, Tagus, Jucar na Eastern Pyrenees. French mkpọda. Ọ bụ ihe a kacha mara amara na Spain niile ma nwee oke ọfụma. Ọnụ ya na-etolite delta ma ama ya Ndagwurugwu Ebro.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara njirimara, geology na nhazi nke ndagwurugwu Ebro.
2 Ojiji nke ala nke ndagwurugwu Ebro
3 Ihu igwe na geology nke ndagwurugwu Ebro
Ndagwurugwu Ebro ma ọ bụ ndagwurugwu Ebro bụ nnukwu ala dị na mgbago mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ nke mmiri Iberia, ebe Osimiri Ebro na-asọba.Ọ bụ n’Osimiri Cantabrian ka ọ na-asọba wee banye n’Oké Osimiri Mediterenian. E nwere ndagwurugwu Ebro site na Pyrenees ruo n’ebe ugwu, Usoro Iberia n’ebe ndịda ya na ógbè ndị dị n’akụkụ osimiri Catalan n’ebe ọwụwa anyanwụ. Nsogbu nke osimiri ahụ dị n’akụkụ osimiri ahụ n’onwe ya na mpaghara ugwu ọwụwa anyanwụ nke mpaghara Iberian Peninsula.
Site na Sierra de Híjar ruo Tortosa, o nwere ihu igwe odika 40.000 square kilomita na ogologo nke 840 kilomita. Ọ gafere site ọdịda anyanwụ ruo n'ọwụwa anyanwụ site na Autonomous Community nke Cantabria, Burgos na Soria na ọwụwa anyanwụ nke Castilla y León, na ndịda Basque Country na Álava, La Rioja, Navarra, Obodo nke Aragon, Catalonia na Valencia bụ n'ebe ugwu nke ógbè Castellón, na-ejedebe na Mediterenian. N'ebe ugwu ya bụ Pyrenees, n'ebe ọwụwa anyanwụ ọ na-ejedebe na Oke Osimiri Coastal Mountain Ranges, na ndịda na ọdịda anyanwụ na usoro Iberia.
Theda mbà n'obi ahụ nwere nkezi ịrị elu nke mita 200 ma gbaa gburugburu nnukwu ugwu. A maara ọnụ ahụ dị ka Delta del Ebro, mpaghara echekwara nkewa dị ka Ogige Eke. O nwere ego nke conglomerates nke mmiri na kọntinent, nke dị oke n'ọnụ ọnụ ugwu ahụ ma ọ bụghị oke oke n'etiti nkụda mmụọ: sandstones, marls, gypsum, salts na nkume nzu. Ihe di iche na ekwe ekwe nke ihe na ala unwu emeela ka odidi ala di iche-iche.
Osimiri ahụ dị na nsogbu dị n'etiti mpaghara Iberian Peninsula na kọntinent Europe, ọ dabara na mmiri ochie ahụ ma mesịa gbanwee ya ka ọ ghọọ ọdọ mmiri, na-ekewapụ agwaetiti Iberian oge niile. Ala Iberian Peninsula jikọtara Africa na Europe.
Ojiji nke ala nke ndagwurugwu Ebro
Uzo ugbo kacha mma nke ala Aragonese di na etiti obi, ebe enwere mmiri na mmiri na mmiri ozuzo kachasị ukwuu ma na-arụpụta ihe maka akuku ọka na vine. Ugbo a bu ihe ndabere nke aku na uba nke Aragon. N'aka nke ọzọ, oghere ndị a bụ ihe eji eme ihe na nke kachasị anya n'akụkọ ihe mere eme, malite n'oge ndị Rom.
Mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi mmiri ozuzo na-anọchite anya usoro eji ala eme ihe dabara adaba maka ọnọdụ gburugburu ebe obibi na-enweghị isi na mpụga mpaghara mmiri. Ndị nọchiri ya ọka-bali na, nke pere mpe, ọka na ryeHa dabere na nkwado nke gọọmentị etiti na ogo ala. Achịcha ọka na-arụ ọrụ kpam kpam ma ka na-eji fallow n'ọtụtụ akụkụ nke Ndagide.
The monoculture nke grains nwere kọmpat ohere na glaciers na ugwu nke Ebro ndagwurugwu na ala calcareous ikpo okwu na ndịda nke Los Monegros. Nanị ihe mgbochi na-egbochi bụ ogige gypsum na Zaragoza. Ọ bụ saịtị na-egbutu ọnụ ọgụgụ buru ibu site na nnukwu netwọk nke ndagwurugwu dị warara, nke bụ ala ahịhịa maka espartos na ndị njem ala nsọ, na mejupụtara ezi agwaetiti ndị dị na etiti ịda mba. Ọrụ ala na-ejedebe na ala dị larịị nke akwụkwọ ego, ebe mkpokọ ahịhịa na-enye ala dị mma ma na-eme ka iru mmiri dị ala.
Ihu igwe na geology nke ndagwurugwu Ebro
N'ime ndagwurugwu Ebro, anyị nwere ike ịchọta oke ọdịiche dị na ihu igwe n'ihi oke mgbatị ahụ nke nwere nsonaazụ nke mmetụta sitere na mgbanwe mgbanwe ihu igwe nke mpaghara Mediterranean na mpaghara mpaghara ụwa. Anyị nwere ike ịkọwa ọdịiche dị iche iche na mpaghara atọ ihu igwe:
Mpaghara Cantabrian: Ọ bụ mpaghara ahụ nke nwere mmiri ozuzo bara ụba na edo edo kwa afọ. Obere onodu ojoo kariri ka ha ghara inwe oke mgbanwe na mberede.
Central ịda mbà: O nwere 80% nke Basin ma nwee mmetụta dị oke mkpa na ihu igwe ọkara na mmiri ozuzo oge. A na-ekesa ugwu ndị a n'oge udu mmiri na ọkọchị.
Mpaghara Mediterranean: ụkọ mmiri ozuzo na oyi na-ajụ oyi dịkarịsịrị na ya n'ihi ịdị nso nke oké osimiri.
Okpomoku na-adi elu nke ogo 26 na onwa kachasi ike na ala nke -4 n'oge onwa oyi. Imirikiti mmiri ozuzo na-ewere ọnọdụ na sistemụ ugwu ugwu nke gafere ugwu nke Ebro. ha ruru ụkpụrụ nke 1800mm / afọ na Pyrenees. Otú ọ dị, na etiti nke ndagwurugwu ụkpụrụ dị nnọọ ala, na-eru n'okpuru 400mm / afọ. Oge mmiri ozuzo a na-enwe kwa afọ maka Basin niile bụ ihe dịka 590 mm.
Banyere geology, o nwekwara ụdị mmụta dị iche iche nke ukwuu yana ihu igwe. Akuku kari okwute-dolomitic, Cenomanenses-Turonenses, Triassic limestones na dolomites na detrital ihe. Dị ka a tụrụ anya ya, na ndagwurugwu a, e nwere usoro mmiri mmiri na mpaghara ndịda nke Basin nwere usoro mmebi nke na-adịkarị n'usoro nke nkwụ na ájá nwere njikọta silts na ụrọ. Ndị a nwere ike ịgbanwe ma nwee carbon na okike.
Onyinye niile nke Basin nwere n’etiti 17.500 na 19,000 hm3 / afọ maka ojiji dị iche iche.
Enyere atụmatụ nke mmiri mmiri dị na 3.730 hm3 / afọ, nke ihe karịrị 3.300 hm3 / afọ bụ discharges na osimiri Ebro.
Mkpokọta onu ogugu nke Basin bu 2.850.000 ndi bi, ya na ihe njuputa nke 33.3 bi na / km2, onu ahia di ala karie ala mba.
Obere obodo mepere emepe kacha, 90% n’ime ha nwere ndị bi na-erughị ndị bi na 2.000.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ndagwurugwu Ebro na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ndagwurugwu Ebro